Ganacsigaagu ma raacayaa Anshaxa Warbaahinta Bulshada Dhaqannada ugu Fiican? | Martech Zone
Aadaabta warbaahinta bulshada… Odhaahda ayaa igu kalifaysa. Waxay umuuqataa inuu had iyo jeer jiro qof iskudayaya inuu waxkastoo xeerar ah u adeegsado wax walba maalmahan iyo Ma adkaysan karo. Dabcan waxaa jira dabeecado aan la aqbali karin qadka iyo khadkaba the laakiin quruxda barxada ayaa ah in hadii aad raacdo ama aad raacdo waxa loogu yeero xeerarka, waxaad arki doontaa natiijooyinka.
Waa tan tusaale… Waxaan raacaa adeeg bixiyaha weyn ee iimaylka barta Twitter-ka waxayna laba jeer igu dhaheen DM iyaga oo xayeysiin dufan weyn u leh shirka soo socda. Ma fileynin xayeysiinta mana aanan siinin ogolaansho in la i xayeysiiyo, sidaa darteed waxaa lagu doodi karaa inay I BADBAADIYEEN - nooc caajis ah. Qaar ka mid ah dadka waawayn ayaa laga yaabaa inay ku qayliyeen dil dhiig ah in shirkad aasaaskeedu uu ku saleysnaa suuq-geyn ku saleysan ogolaansho ay wax uun ku dhejiso sanduuqa qof walba ee Twitter-ka ee aysan weydiisan. Kama cabanin, waan iska indhatiray xayeysiinta.
Haddana waxaan isweydiiyey… ma shaqaysay? Haddii shirkadda su'aashu ay awood u yeelatay inay beddesho kuwa raacsan qaar iyadoo riixeysa SPAM natiijaduna aysan aheyn wax cabasho ama dadweyne aan raacin, wax ma dhaawacday? Taasi waa dhibaatada akhlaaqda, waxay quseysaa xeerar dhowr ah oo aan cidna ku heshiin si loo maareeyo dhibaato aan jiri karin. Anigu ma raaco xeerarka aadaabta, weligayna ma raaci doono. Waxaan raacayaa qawaaniinteyda gaarka ah dadkuna si farxad leh ayey i raaci karaan ama iga raaci sida ay rabaan (iyo in yar oo iyaga ka mid ah ayaa sameeya!).
Tani macluumaad ku saabsan TollFreeForwarding wuxuu dejiyaa barxad kasta oo bulsheed iyo aadaabta la socota mid kasta. Haddii aad ubaahantahay inaad kudagaalanto hashtags-kaaga Twitter iyo Instagram ama aad ku hagaajiso ilahaaga Pinterest, raac xeerarkan waxaadna isku arki doontaa inaad ku faraxdo, ku qanacsan tahay soo socda bulsho!
Aan u hoggaansamin xeerarka anshaxa warbaahinta bulshada waxay siin kartaa ganacsi leh soo-gaadhis dheeraad ah iyo, laga yaabee, natiijooyin wanaagsan. Maxay kula tahay
Tags: Facebookaadaabta facebookgoogle daraygoogle +google + edebLinkedInastaamaha ku xidhanPinterestedebta pinterestxeerarka warbaahinta bulshadahababka ugu wanaagsan ee warbaahinta bulshadaaadaabta warbaahinta bulshadaanshaxa warbaahinta bulshada dhaqanka ugu fiicanxeerarka warbaahinta bulshadaTwitteraadaabta twitter
Sep 6, 2014 at 1: 31 AM
Haa waa hagaag taasi waxay xiiso u laheyd ka soo gudbinta macluumaadkaaga iyo sidoo kale macluumaad aad u badan !!
Oo waxaan jeclaan lahaa inaan kuugu mahadnaqo inaad nala wadaagtay boostada !!